ပဋိဇီဝဆေးများ - ဆေးများ. ပဋိဇီဝဆေးများ ကို ဘက်တီးရီးယားပိ
ပဋိဇီဝဆေးများ - ဆေးများ. ပဋိဇီဝဆေးများ ကို ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများကို ကုသခြင်း နှင့် ကာကွယ်ခြင်း များတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းဆေးဝါးများသည ..
ကလေးမီးဖွားပြီး သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီးနောက် အမျိုးသမီးမျိုးပွားလမ်းကြောင်း တွင် ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို မီးဖွားပြီးရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ ကိုယ်အပူချိန် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ထက် မြင့်မားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းအောင့်ခြင်းနှင့် မိန်းမကိုယ်မှ အနံ့ဆိုးသောအရည်အချွဲဆင်းခြင်းစသော လက္ခဏာများ ဖြစ်တတ်သည်။ ကလေးမီးဖွားပြီး သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျပြီး နာရီအတွင်းမှ ရက်အတွင်းတွင် ဖြစ်တတ်သည်။ အများအားဖြင့် သားအိမ် uterusနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအင်္ဂါများကို ရောဂါကူးစက်လေ့ရှိပြီး ၎င်းကို မီးဖွားပြီးသွေးဆိပ်တက်ခြင်း puerperal sepsis သို့မဟုတ် မီးဖွားပြီးသားအိမ်ရေ ...
မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေခြင်းဆိုသည်မှာ ကလေးမီးဖွားချိန်တွင် သားအိမ်မှ ပုံမှန်ညှစ်နေသော်လည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေသောကြောင့် တင်ပဆုံရိုးအတွင်းမှ သန္ဓေသားထွက်မလာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန္ဓေသားတွင်ဖြစ်တတ်သော နောက်ဆက်တွဲပြဿနာမှာ အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာမရသောကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ မိခင်၌လည်း ရောဂါပိုးကူးစက်ခံနိုင်ခြေရှိခြင်း၊ သားအိမ်ကွဲထွက်ခြင်းနှင့် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ မိခင်တွင် ရေရှည်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာအနေဖြင့် မီးဖွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ဂရင်ဂျီနာဖြစ်တတ်သည်။ မွေးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေခြင်းကြောင့် ရှည်ကြာသောမီးဖွားခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်သည်။ ရှည်ကြာသောမီးဖွ ...
ပဋိဇီဝဆေးများ သည် ကာကွယ်ဆေးများ ပေါ်ထွက်လာမှု နှင့်အတူ ၂၀ ရာစုခေတ် မှစ၍ ဆေးပညာကို တော်လှန်ပြောင်းလဲခဲ့ရာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် တီဘီ ကဲ့သို့သော ရောဂါကိုပင် လုံးဝကင်းစင် စေရန် ဦးတည်နေပြီဖြစ်သည်။ ဆေးများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်မှု တို့ကြောင့် လွန်ကဲစွာ သုံးစွဲလာရာမှ ဘက်တီးရီးယားများကို ဆေးယဉ်ပါးမှု အထူးသဖြင့် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေး နယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပွားလာစေသည်။ ထို့ကြောင့် ပဋိဇီဝဆေး ယဉ်ပါးမှု ပြဿနာသည် ကျယ်ပြန့်လာပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ "အနာဂတ်တွင် မဟုတ်ဘဲ ယခုလက်ရှိကာလ၏ ပြင်းထန်သည့် အန္တရာယ် အဖြစ်ရှုမြင်ပြီး မည်သည့်နိုင်ငံ တွင်မဆို အသက်အရွယ်မရွေး၊ လူမျိုးမရွေး ထိခိုက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်"အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါသည်။
ပဋိဇီဝဆေးဖြင့် ပထမဆုံး ကုသမှုကို ခရစ်နှစ် ၁၉၀၇ ခုနှစ် တွင် အဲလ်ဖရက် ဘာသိမ်း Alfred Bertheim နှင့် ပေါလ်အားလစ် Paul Ehrlich က ဆစ်ဖလစ် ရောဂါကုဆေး အာစ်ဖင်နမင်း arsphenamine ဆေးကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် နိုင်မှု နှင့်အတူ စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ဂျာဟာဒ် ဒွမ်မဂ် Gerhard Domagk က ပထမဆုံး ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဆေးအာနိသင် ထိရောက်မှု ရှိသော ပဋိဇီဝဆေး ဖြစ်သည့် ပရိုတွန်စေးလ် prontosil ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် နိုင်သောကြောင့် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် နိုဘယ်ဆု Nobel Prize ကို ရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးပြုနေသော ဆေးမျိုရင်းများအားလုံး မှာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်လွန်ပိုင်း မတိုင်ခင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
1. ဆေးပညာ အသုံးများ Usage of Antibiotics
ကုသခြင်း Medical Care.
ဘက်တီးရီးယား ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ အား ကုသခြင်း Treatment of bacterial diseases.
ပရိုတိုဇိုဝ ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများအား ကုသခြင်း Treatment of protozoa-related diseases.
ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ ရောဂါ အချို့ တွင် ကုသခြင်း Treatment of diseases attacking immune system.
သွေးဖြူဥ နည်းသည့် ရောဂါ တွင် ကိုယ်တွင်းသို့ ပိုးဝင်ပြီး ရောဂါမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ခြင်း Prevent against sepsis due to lukemia.
ခွဲစိတ်ဒဏ်ရာများ ပိုးဝင်ရောင်ရမ်းမှု မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ခြင်း Prevent against sepsis for surgical operations.
သွားဘက်ဆိုင်ရာ ကုသမှုများတွင် ပိုးမဝင်စေရန် ကာကွယ်ခြင်း Prevent against sepsis for dental treatments.
ကာကွယ်ခြင်း Preventive Measures.